Samsung ရဲ့ တီဗီနည်းပညာအသစ် QLED ဆိုတာဘာလဲ? – DigitalTimes.com.mm
Samsung ရဲ့ တီဗီနည်းပညာအသစ် QLED ဆိုတာဘာလဲ?
Samsung က CES 2017 မှာ QLED TV အသစ်များကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ QLED ဟာ လက်ရှိ OLED တီဗီနည်းပညာနဲ့ ဆင်တူမှုများစွာ ရှိတဲ့အတွက် QLED ဆိုတာ ဘာလဲ ? သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံက ဘယ်လိုလဲ? QLED နဲ့ OLED တို့ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်များက ဘာလဲဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
QLED ဆိုတာ ဘာလဲ?
QLED ရဲ့ အရှည်ဟာ Quantum Dot LEDs ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ OLED( Organic Light Emitting Diodes ) နဲ့ တူညီတဲ့ စွမ်းရည်များစွာ ရှိပါတယ်။ QLED ဟာ Samsung ရဲ့ ယခင်နှစ်ထုတ် SUHD TV များရဲ့ Quantum-Dot TV နည်းပညာကို အဆင့်မြှင့်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ LG နဲ့ Sony တို့က OLED ကို အသုံးပြုနေစဉ်မှာ Samsung က QLED နည်းပညာအသစ်ကို အသုံးပြုတဲ့ တစ်ဦးထဲသော တီဗီထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်လာပါတယ်။
QLED ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ
Samsung ရဲ့ ယခင်နှစ်ထုတ် SUHD TV များမှာ Quantum-Dot နည်းပညာကို မြင်ခဲ့ကြရပြီးပါပြီ။ Quantum Dots များဟာ အလွန်သေးငယ်တဲ့ Particles များဖြစ်ကြပြီး အချင်းအားဖြင့် ၂ နဲ့ ၁၀ နာနိုမီတာအကြားမှာ ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်က အလွန်တောက်ပကြည်လင်ပြီး အသေးစိတ်ကျတဲ့ အရောင်များကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ အဲဒီစွမ်းရည်က HDR Content များကို ပိုမို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ QLED ကတော့ Quantum Dots ကို အဆင့်မြှင့်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမားရိုးကျ LCD Panel အရှေ့မှာ Quantum Dots အလွှာတစ်ထပ် ထားရှိထားပြီး Dots များက အရွယ်အစားအပေါ် မူတည်၍ ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်များ ထုတ်လွှင့်ပေးကြပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အရောင်များဟာ ပိုမို အသေးစိတ်ကျပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်ပိုင်အလင်းရောင်ထုတ်လွှင့်တဲ့ OLED နဲ့ ဆင်တူတဲ့ စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် Quantum Dots နည်းပညာက တောက်ပမှု အပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးပါ။ OLED Screen များရဲ့ အံ့မခန်းစွမ်းရည်ဟာ အသေးစိတ်ကျတဲ့ အနက်ရောင်များကို ဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ QLED နည်းပညာအသစ်က LCD Screen များကနေ OLED လို အသေးစိတ်ကျတဲ့ အနက်ရောင်များကို ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ အတွက် ၂ ဖက်စလုံးမှာ စွမ်းရည်မြင့်တဲ့ နည်းပညာဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘက်ပေါင်းစုံကနေ အလင်းရောင် ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်လာပြီး သမားရိုးကျ LCD Screen များကတော့ တစ်နေရာထဲကနေသာ အလင်းရောင် ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် QLED များဟာ အလင်းရောင်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ ရှုထောင့်နဲ့ အနက်ရောင် ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းမှာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
QLED နဲ့ OLED ရဲ့ နောက်ထပ် ကွဲပြားမှုက ဈေးနှုန်းပါ။ OLED များဟာ LCD များထက် ထုတ်လုပ်ရတာ ခက်ခဲပြီး ကုန်ကျစားရိတ်ကြီးမားပါတယ်။ Samsung က QLED TV များရဲ့ ဈေးနှုန်းကို ကြေညာခြင်း မရှိသေးပေမယ့် ဒါဟာ OLED TV များကို ဈေးနှုန်းအရ နောက်ကောက်ချနိုင်မယ့် နည်းပညာ ဖြစ်လာမှာပါ။
Samsung ရဲ့ QLED TV တွေ ဘယ်အချိန် ရေပန်းစားလာမလဲ?
Samsung ရဲ့ QLED TV များဟာ ပြိုင်ဖက်များထက် အဖက်ဖက်က စွမ်းရည်မြင့်တဲ့ တီဗီများ ဖြစ်လာကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အားနည်းချက်က LCD Screen များကို ဆက်လက် အသုံးပြုနေရဆဲ ဖြစ်ပြီး နည်းပညာကိုသာ ဆန်းသစ်ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ယခုနှစ်ထဲမှာ Samsung ရဲ့ QLED TV များ ထွက်ပေါ်လာဦးမှာ မဟုတ်ဘဲ ပြိုင်ဖက် Sony နဲ့ LG တို့ရဲ့ OLED TV များသာ ယခုနှစ်မှာ ထွက်ပေါ်လာမှာပါ။ သေချာတာကတော့ Samsung ရဲ့ QLED TV များဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်လောက်မှ ရေပန်းစားလာမှာပါ။
ref : trusted reviews, pocket-lint